ဘလော့ဂါ ဘလော့ရဲ့ အားသာချက်များ - Blogger (blogspot) Strong Points - နည်းပညာ
← Blogspot ပြုလုပ်နည်း – How to makeablogger website Blogspot menu ပြုလုပ်နည်း – How to create main menu in blogger →
21 thoughts on “ဘလော့ဂါ ဘလော့ရဲ့ အားသာချက်များ – blogger (blogspot) strong points”
Htmlမှာပုံပေါ်ချင် ရင် ဆို VIDEOတင်ရေး ရင်ကော့ ဘာTAGတွေ သုံးရပါလဲ
ဘာမေးတာလဲခင်ဗျ၊ နားမလည်လို့ …
zawzawlay seven says:
menu tab မှာ mouse လေးတင်ထားလိုက်တာနဲ့ down list လေး ကျလာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရပါသလဲ……..blog ကို လေ့ လာတုန်းမို့ လို့ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်..နောက်မဟုတ်ရင် အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေ တော်တော်ကို များနေလို့ ပါ…အဲ့ တစ်ခုလေး သိချင်ပါတယ်
blog 1ခုကို html & Css နဲ့
web design အလှဆင်လို့မရဘူးလားခင်ဗျာ
Kyi Pyar Lwin Oo says:
Google Absence နဲ့ပတ်​သက်​ပြီး တင်​​ပေးပါလား ရှင့်​
google adsense တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါလားဗျ
Adsense နဲ့ blogspot ချိတ်ဆက်ပုံလေးရှင်းပြပေးပါဦး ဆရာ။ အဆင်မပြေသေးလို့။ Top level domain ရှိမှရတာလား။ ဘလော့မှာ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။ အဆင်ပြေရင် အသေးစိတ်လေး ရှင်းပြပေးပါ့လားဆရာ။
အားရင် article တစ်ခုရေးပေးပါမယ်။ အခုတော့ မအားသေးလို့ပါ။
Google Adsense ကလွယ်လွယ်တော့မရပါ.. ပထမဆုံး Gmail အကောင့်နဲ့ google Adsense မှာ Sing Up လုပ်ရမှာပါ.. Sing up ပီးရင် Adsense လျောက်မဲ့ URL နဲ့ Email ကိုရေးပီး Done လိုက်ပါ.. မေးလဲထဲကို စာဝင်လာပါလိမ့်မယ် ဒါဆို Adsense Sing Up အဆင့်ပီးပါပီ.. ပီးတာနဲ့ ခုန Email ထဲမှာ google Adsense ကပို့တဲ့ Code ကို Copy ယူပီး ကိုယ့် Blog ရဲ့ Theme ကိုသွားပါ HTMI ထဲက နေရာအောက်လေးမှာ ခုန Copy ထားတဲ့ Code ကို Paste လုပ်ပါ ပီးရင် Done.. ပီးရင် Layout ကိုသွား Add Gatged မှာ Adsnese ကို + ထည်ါလိုက်ပါ.. ပီးရင် Save.. အဲ့ဒါပီးတာနဲ့ Email ပြန်စောင့်ပါ ၃ ရက်လောက်ကြာပါလိမ့်မယ်.. Email ရောက်လာရင် ဝင်လိုက်ရင် Adsense အတွက် ဘယ်နေရာ ဘယ်အရောင် ဘယ်လိုပုံစံရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်.. အဲ့ဒါကတော့ Earn ဆိုတဲ့နေရာကနေသွားလုပ်ရမှာပါ.. အဲ့အဆင့်ပီးရင် Google Adsense Aprrove ကို ထပ်စောင့်ရပါတယ်.. ကိုယ့်ဝက်ဆိုဒ်ဟာ သူတို့ review ကြည်ါတဲ့အချိန်မှာ လုံးဝ strong့ ဖစ်နေရပါ့မယ်.. Copy Right ငြိလို့မရပါဘူး
မြန်မာစာနဲ့တင်လို့မရပါဘူး.. အဲ့ဒါတွေအားလုံး ကိုယ့်ဝက်ဆိုက်က ပါနေရင်တော့ adsense လျောက်တာကို လက်လျော့လိုက်ပါတော့ အဲ့အဆင့်မှာတင်ပြုတ်ပါပီ.. သိရအောင်ရှင်းပြပေတာပါ, Google adsense ကမြန်မာပြည်အတွက် Listထဲမှာ မပါသေးပါဘူး.. ဒါကြောာင့်လျောက်နေလည်း အလကားပါပဲ.. Thai မှာဆို အဆင်ပြေပါတယ်.. မြန်မာပြည်အတွက် မရပါ မရတဲ့အတွက် Payment မှာလည်း ဘာမှမတက်ပါ
video file size ကြီးကြီးတင်လို့ရလားခင်ဗျ
Aung Kyaw Myo says:
Blog ကိုဝင်ရင် Blog ထဲ တိုက်ရိုက်မရောက်ဘဲနဲ့ YES I UNDERSTAND AND I WISH TO CONGINUTE ဆိုတဲ့ အဆင့်တစ်ဆင့်က ဘာဖြစ် လို့ ခံနေတာလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါဗျ။
Mg Thet Oh says:
WordPress လက်ရှိသုံးနေတာ ၁၀ နှစ်ကျော်နေပြီ
Blogspot ကို ရွှေ့ဖို့ လွယ်ပါ့မလား
Posts တွေ Categories တွေ Menus တွေရော
WordPress ကလည်း custom hosting နဲ့ဆို တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ အသစ်သုံးမယ့်လူတွေအတွက် ရေးထားတာပါ။ မ ပြောင်းပါနဲ့ အဆင်မ ပြေနိုင်ပါဘူး။
Aung Kuang says:
Blog တွေအတွက် ဘယ် theme သုံးရင် အဆင်ပြေလဲ ဗျ